Ihe omume, Mgbakọ na Webinars | Martech Zone
Nzukọ na-abịanụ, nzukọ nke mebere, webinars na mmemme ahịa ahịa ndị ọzọ nwere mmasị na Martech Zone
N'adịghị ka webinars ọdịnala, Agencylọ Ọrụ Nnọchiteanya ga-adị ka ihe omume onye anyị na-atụ uche. Site n'inwe ike ikwu okwu ihu na ihu na ndị ọkà okwu mgbe ha kwusịrị, iji zute ma na-akparịta ụka na ndị ọzọ bịara, a ga-enwe ọtụtụ ohere maka oge anwansi. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime isiokwu dị iche iche: Otu esi ewulite sistemụ ire ahịa maka ụlọ ọrụ gị - Soro Lee Goff ka ọ na-ekpuchi 4
Obi abụọ adịghị ya na ọrịa COVID-19 gbariri ụlọ ọrụ ndị na-ere ahịa. Dịka ndị ahịa Cloud Cloud, agbanyeghị, ị nwere ohere nke ndị asọmpi gị anaghị eme. Ọrịa ahụ agbatịwo nnabata dijitalụ na omume ndị ahụ ga-aga n'ihu na-eto ka akụnụba na-agbake. Na webinar a, anyị ga-enye usoro aghụghọ 3 na atụmatụ iri na abụọ gafere ha na nzukọ gị kwesịrị ibute ụzọ taa - ọ bụghị naanị ịlanarị nsogbu a kama ime nke ọma